China Conductive Titanium Dioxide Manufacture and Factory | UNoelson
I-NOELSON ™ Brand Conductive Titanium Dioxide EC-320 ingumkhiqizo ohlangene osuselwa kukhwalithi ephezulu ye-titanium dioxide, ukucubungula ngokwelashwa kwendawo usebenzisa i-nanotechnology, umhlaba owodwa owaziwa ngochungechunge lomkhiqizo wesizukulwane sesibili oluhamba phambili.
I-NOELSON ™ Brand Conductive Titanium Dioxide EC-320 ingumkhiqizo ohlangene osuselwa kukhwalithi ephezulu ye-titanium i-dioxide, icubungula ukwelashwa komhlaba kusetshenziswa i-nanotechnology, isizukulwane sesibili esaziwa ngomhlaba uchungechunge lomkhiqizo oluqhubayo. Njengokusebenza okukodwa okusebenzayo okusebenzayo, i-EC-320 inezinzuzo eziningi, njenge: umbala okhanyayo, osakazeka kalula, ukusebenza okubanzi, ukuqhuba okuphezulu, i-anticorrosion, ukuvutha okuvuthayo, ukufihla okuhle amandla, njll. Kakhulu kusetshenziselwa ukufaka esikhundleni semikhiqizo ebizayo engenisiwe. Iminyaka eminingi, sifunda ngokujulile kulezi field futhi ufeze inqubekela phambili engaguquki. Ikhwalithi yethu yemikhiqizo inesikhundla esiphambili eChina.
I-NOELSON ™ EC-320 (C), iwuhlobo olulodwa olujwayelekile.
Izici Kuhle ukusabalalisa ukukhanya, ukukhanya okuhle, ubumhlophe namandla okufihla
Ukuzinza kweThermo ℃ ≥600-800
Ukuzinza Kwamakhemikhali Melana ne-asidi, i-alkali, ne-solvents engokwemvelo; Ayikho i-oxidation; Ukulibaziseka okuvuthayo
Isilinganiso sesayizi yezinhlayiyana (D50) Um5um
Ubuningi g / cm3 2.8-3.2
Ukumunca u-oyela ml / 100g 35 ~ 45
Ukubuyiselwa Ω · cm ≤100
►I-EC-320 (C) isetshenziswa kakhulu ekuhlanganisweni, oplastikhi, iraba, ukunamathela, uyinki, iphepha elikhethekile, izinto zokwakha, izinhlobo zezinto ezihlanganisiwe, i-textile fiber, imikhiqizo ye-elekthronikhi, imboni yobumba, njll.
►I-Conductive Titanium Dioxide ingenziwa ngemibala esondele emhlophe noma eminye imibala ekhanyayo eqhubekayo, imikhiqizo ye-antistatic. Ikakhulukazi esebenza kuleyo mikhiqizo ehambisanayo ne-antistatic enezidingo eziphezulu ebumhlophe. Futhi kungasetshenziswa ukwenza eminye imikhiqizo yombala uma umbala ungeziwe. Njengoba indawo okufakwa kuyo ukwakheka kwamangqamuzana iya ngokuya iba banzi futhi ibanzi, izindawo ezidinga ukwelashwa okuqhubayo nokulwa neziqubu ziya ngokuya zanda. Ngakho ukukhanya conductive powder chungechunge ingasetshenziswa kabanzi.
►Ukusebenza kokusebenza kwezinto ezihambisanayo nezokulwa kuncike kubuchwepheshe bokucubungula nokugcwalisa okuhlobene, i-resin, umgqugquzeli, izixazululo kwifomula, futhi kuthonywe ukusebenza kwemikhiqizo eboshwe kohlelo lokumboza. Ngokuvamile, uma i-conductive titanium dioxide ingezwe kuze kufike ku-15% ~ 25% (PWC), i-resistivity ingafika ku-105 ～ 106～ • cm.
► Umehluko phakathi kwe-conductive titanium dioxide ne-conductive mica powder: Kungcono uma i-mica powder i-conductive mica powder isetshenziswa ezinhlelweni zokumboza nakuyinki. Ngokuphambene nalokho, kungcono uma eyindilinga noma i-acicular conductive titanium dioxide isetshenziswa ezinhlelweni zenjoloba kanye nepulasitiki. Empeleni, ukumiswa nosayizi ohlukile we-conductive powder mix ongayisebenzisa kungafinyelela ukusebenza okungcono kokuqhuba. Isibonelo, isilinganiso esiphakathi kwe-conductive mica powder ne-conductive titanium dioxide: 4: 1 ~ 10: 1. Isimo sokugcwalisa kungathinta ngqo ukusebenza kwe-conductivity, ukugcwalisa ngokungafanele kube nethonya elingcono kunokugcwalisa njalo, kungachazwa ngokuxhumana nendawo. Ukuhlanganiswa kwe-Conductive alloy powder ne-Conductive mica powder kuzothuthukisa kakhulu ugesi Ukusebenza okusebenzayo lapho kukhiqizwa ukugcotshwa kwe-antistatic floor, futhi kunciphise izindleko eziningi. Ukuhlangana okuyindilinga ne-acicular ongakusebenzisa kungashintsha isimo sokugcwaliswa kwempuphu eqhubayo, amafomu wokuxhumana atholakele: i-flake ne-flake, i-flake ngephuzu, nokukhomba ngephuzu, ngakho-ke ukusebenza kokusebenza kukagesi kuthuthukile.
► Ngezansi kwenani elibucayi, ukusebenza kwezinto kuzothuthukiswa ngokwanda kwevolumu yokungezwa yempuphu eqhubayo, futhi ngemuva kwalelo phuzu, ukuqhutshwa komsebenzi kuzoqala phansi noma kwehle.
I-NOELSON ™ Brand eyenziwayo kanye nama-anti-static agents chungechunge, njengamanje ingumkhiqizi oholayo wezentuthuko onamamodeli aphelele wokufaka isicelo kanye nemikhiqizo yokuphromotha ye-powder eqhubayo nezinto zokwakha eChina futhi inethonya eliningi ezifuywayo naphesheya kwezilwandle. Yonke imikhiqizo esiyinikezayo inekhwalithi enhle nentengo yokuncintisana. Ngaphandle kwemikhiqizo esiyihlinzekayo, siphinde sinikeze ngezinsizakalo ezigcwele nezizungezile zobuchwepheshe, zamakhasimende nezokungena kuwo wonke amaklayenti.
10-25KGS / Bag noma 25KGS / Paper Tube 14-18MT / 20'FCL Isitsha.
Langaphambilini I-Zinc phosphate aluminium
Olandelayo: Abahle be-Ferro-phosphorus Powder